Wararkii ugu dambeeyey dagaal ka dhacay duleedka Beledweyne – Radio Baidoa
Wararkii ugu dambeeyey dagaal ka dhacay duleedka Beledweyne
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan dagaal culus oo deegaan duleedka ka ah Beledweyne Maanta ku dhex-marey Ciidamo ka tirsan kuwa Guutada 5aad Qeybta 27aad iyo Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab,kaas oo geystay khasaaro kala duwan.
Dagaalka oo ka dhacay deegaanka Bitaale oo u dhow Deegaanka luuq jeelow oo qiyaastii in ka badan 10km dhanka Galbeed ka xiga Beledweyne ayaa yimid,kadib markii Ciidamada Millateriga Soomaaliya ay deegaankaasi weerar ku qaadeen sida ay Risaala u sheegeen Saraakiil Ciidan.
Dad ku sugan deegaanka luuq jeelow ayaa waxaa ay sheegeen in haatan dagaalka istaagey,hayeeshee weli ay jirto cabsi badan maadaama weli Ciidamada Dowladda Soomaaliya ay wadaan dhaq dhaqaaqyo Ciidan,waxaana jira khasaaro labada dhinac kasoo gaarey dagaalka.
Wararka laga helay Beledweyne ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi siweyn looga dareemay dagaalka Maanta ka dhacay deegaanka Bitaale oo u dhow Deegaanka luuq jeelow oo qiyaastii in ka badan 10km dhanka Galbeed ka xigta Beledweyne,isla markaana ay ka cabsi qabeen in uu saameyn ku yeesho.
Saraakiisha Ciidamada qeybta 27aad dhankooda weli kama hadlin dagaalka Maanta ay Ciidamada Dowladda duleedka Magaalada Beledweyne kula galeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Warmurtiyeed laga soo saaray Shirkii Madasha Xisbiyada Qaran